Trump oo weerar afka ah ku qaaday Dr. Anthony Fauci iyo Senatoro ka tirsan xisbigiisa oo ku… – Hagaag.com
Trump oo weerar afka ah ku qaaday Dr. Anthony Fauci iyo Senatoro ka tirsan xisbigiisa oo ku…
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday dadka dhaliila ee ka socda xubno ka tirsan xisbigiisa Jamhuuriga, iyo xubin ka tirsan kooxda Aqalka Cad ee la dagaalanta fayraska Corona, Anthony Fauci, isagoo ku tilmaamay kuwa doqono ah.
Trump ayaa yiri intii uu khadka taleefanka kula xiriirayay xubno ka tirsan kooxdiisii ​​ololaha doorashada in dadku ay ku daaleen Fauci oo ka hadlaya fayraska “Covid-19”, isaga oo ku sifeynaya ninka masiibo, wuxuu ku daray sida shabakada Politico ee Mareykanka ay sheegtay “Dadku waxay dhahaan: Noo daaya shu’ uunteena, way ku daaleen dhageysiga Fauci, iyo nacasyadaas oo dhan. “
Trump ayaa intaa ku daray, “Had iyo jeer waxaa jira bam uu Fauci ridayo aragti kasta oo aragtida dadweynaha ah, laakiin wuxuu carrabka ku adkeeyay inay noqon doonto bam weyn haddii la eryo,” sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan ololaha uu ka soo xigtay Trump.
Ka sokow xubinimadiisa kooxda Aqalka Cad ee ka hortageysa Corona, Fauci, oo aad looga xushmeeyo Mareykanka, wuxuu madax ka yahay Machadka Qaranka ee Xasaasiyadda iyo Cudurada faafa.
Weerarkii uu Trump ku qaaday Fauchi waa mid si gaar ah u muuqda, maadaama madaxweynaha laftiisu qirayo kalsoonida dadka iyo ixtiraamka ay u hayaan khabiirka cudurada faafa ee dalka, ololahiisiina wuxuu xitaa u adeegsadaa fiidyowyada Fauci xayeysiinta lacagta lagu bixiyo.
Fauci ayaa si adag u diiday adeegsiga ololaha Trump ee ka faa’iideysiga agabyada fiidiyowga, maadaama uu yahay shaqsi aan xisbi ka tirsaneyn, wuxuuna sheegay usbuuc ka hor inuu aad uga xumaaday adeegsiga hadaladiisa fiidiyowga ay diyaariyeen kooxda ololaha Trump ee ku saabsan cudurka corona ee soo ifbaxay.
“Ku dhowaad 50 sano oo aan ka shaqeynayay adeegga bulshada, weligey kuma aanan dhawaaqin taageero muuqata ee musharax kasta,” ayuu yiri Fauci, isaga oo ka hadlaya doorashooyinka madaxweynaha.